Fabregas: Waan la yaabay Messi miyuu caalam kale ka yimid. - Caasimada Online
Home Warar Fabregas: Waan la yaabay Messi miyuu caalam kale ka yimid.
Fabregas: Waan la yaabay Messi miyuu caalam kale ka yimid.
Ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Barcelona Cesc Fabregas ayaa amaan kala dul dhacay xidiga ay isku kooxda yihiin ee Lionel Messi, ka dib markii ciyaaryahanka reer Argentina uu sedaxleey ka dhaliyey kulankii ay 5-4 ku dubteen kooxda Deportivo La Coruna.
Blaugrana ayaa heysatay hugaan 3-0 ah, iyadoo casaan loo taagey Javier Mascherano wiilasha Tito Vilanova ayaaba ku sigtay inay guul kasoo qaadan waayaan kooxda martidala loo ahaa.
Dhanka kale Fabregas ayaa amaan kala dul dhacay geesigii Sedaxleyda, wuxuuna ku sheegay mid usoo hooyey sedax dhibic oo qaali ah.
“Messi wuxuu safar dheer kasoo galay xulkiisa qaranka halkaan ayuuna had iyo jeer nala joogay. Wuxuu noo qabtaa wax badan. Wax walba waa uu la socdaa. Laga yaabee inuu Messi caalam kale ka yimid.” Sidaas waxaa yiri Fabrigas oo la hadlaayey saxaafada.